Imiba Ababulali beSerial
.22 Ababulali bamaCraber
Abazalwana uGary noThadede Lewingdon basebenzisa ubuninzi bowe-1977 no-1978 benza uchungechunge lwezilwanyana zasemakhaya kunye nokubulala ngobuhlungu kulo lonke elaseColumbus, e-Ohio nakwiindawo ezikufutshane. Bafumana isiteketiso, "ababulali abangama-22" emva kokuphazamisa i-Ohio ephakathi kwiinyanga ezingama-24.
Amapolisa agxothwa. Yonke into ababeyifumana ngayo izikhokelo yayiyi-shell shells eyayishiywe emva kwimibala yokubulala.
Disemba 10, 1977
U-Joyce Vermilion, 37, noKaren Dodrill, 33, bahlaselwa ngaphandle kwe-Forkers Cafe e-Newark, e-Ohio malunga ne-3 ekuseni.
Amapolisa afumana amaninzi amabhola ekhanda ephuma kwisibhamu se-.22-caliber, esasazeka kwiqhwa.
Kamva, ngenxa yezizathu ezingaziwa, u-Claudia Yasko oneminyaka engama-26 ubudala, wavuma emapoliseni ukuba wabona ubungqina balo mbulali waza wafaka inkwenkwe yakhe kunye nomhlobo wakhe njengabahlaseli. Bonke abathathu baboshwa baza bahlawuliswa ngokubulala, kodwa ekugqibeleni bayeke ukulandela abazalwana baseLewingdon bavakalisa ulwaphulo-mthetho.
NgoFebruwari 12, 1978
URobert "Mickey" UMcCann, oneminyaka engu-52, unina, uDorothy Marie McCann, 77, kunye nentombi kaMcCann, uChris Herdman, 26, bafunyanwe ngokugqithisileyo emzini kaRobert McCann eFranklin County. Ixhoba ngalinye lidutshulwa kaninzi, ngokubanzi lijikeleze ubuso kunye nentloko. I-Shell casings evela kumpu we-22-caliber yafunyanwa isakaze ijikeleze imizimba.
I-Bureau Bureau ye-Criminal Uphando yakhawuleza ukudibanisa iigobolondo ezifumaneka kwiindawo zombini zokubulala.
Aprili 8, 1978
UJenkin T. Jones, 77, waseGranville, Ohio, ufunyanwe efile ephethe izibhamu ezityhutyhileyo entloko yakhe nakwezinye iinxalenye zomzimba wakhe.
Kwadutshulwa kwakuyizinja zakhe ezine. Amapolisa aphinda aphinde athole i-shell shells kwi-gun-caliber gun.
Epreli 30, 1978
Umgcini wokhuseleko lwengxowankulu, uMfundisi Gerald Fields, wabulawa ngelixa esebenza e-Fairfield County. Iimvavanyo zengqungquthela zibonise ukuba i-shellings casings efunyenwe kwimeko yoluhlu lolwaphulo-mhlaba ifana nalawo atholakala kwezinye iindawo ezibugebengu.
Meyi 21, 1978
UJerry noMarta Martin bafunyenwe badutshulwa ekufeni kwindlu yabo e-Franklin County. UMartha wayefanele afike kwi-51 ngosuku umzimba wakhe wafunyanwa. Bobabini uJerry noMarta badutshulwa kaninzi ekhanda. Kwakhona, i-shelling casings esuka kwisibhamu .22-caliber yafunyanwa ekhaya.
Oku kwakuya kubulala uThilide, kodwa uGary wakhalaza ukuba ufuna imali yeKrisimesi.
Disemba 4, 1978
UJoseph Annick, 56, wadutshulwa wabulawa kwigaraji lakhe. Lo mcimbi wawuqhelekileyo kumapolisa, kodwa ngeli xesha i-gun-caliber isetyenzisiwe.
Ngomhla kaDisemba 9, 1978, uGary Lewingdon waya evenkile kwisitoreji esithengisayo apho wathenga i-$ 45 kwimidlalo yokudlala abantwana bakhe. Wasebenzisa ikhadi lika-Joseph Annick lekhredithi elalibiwe njengebiwa. UGary uvalelwa kwindawo yokupaka.
Emva kokugcinwa kwamapolisa, uGary wabuvuma ngokukhawuleza ukuba yena kunye nomsebenzi womzalwana wakhe kwizenzo zolwaphulo-mthetho.
NgoDisemba 14, 1978, phantse unyaka emva kokubulala okuqala, uGary noThadede Lewingdon babetyala ngokubulala . UTadide wathola imigaqo emithathu yobomi emva kokufunyanwa enetyala lokubulala iVermillion, iDodrill noJones. UGary ufunyaniswe enetyala lokubulala abathathu kwabashumi abaxhoba kwaye bafumana imibandela yesibhozo yobomi.
UThadedi wahlala entolongweni de wafa ngumdlavuza wamaphaphu ngo-Apreli, 1989.
Ngethuba lakhe entolongweni wayethanda ukuthatha incinci yolwazi ayenayo malunga nomthetho, kwaye uyisebenzise ukunyanzela inkqubo yenkundla ngokuchithwa komthetho. Kwesinye isihlandlo, wakhononda ukuba intolongo yayigcwele, "abantu abaninzi abanobubi nabanobucayi abangeke baphumele ezindleleni".
UGary waba yingqondo kwaye wahanjiswa esibhedlele saseburhulumenteni ngenxa yecala lobugebengu, kodwa kamva wabuyela e-Southern Ohio Correctional Facility eLucasville emva kokuzama ukubalekela esibhedlele. Wafa ngenxa yokungaphumeleli kwentliziyo ngo-Oktobha, 2004.
Emva kokuba abo babini bevuma, abazange bathethe kakhulu malunga nobugebengu babo okanye oko kwabashukumisela ukuba benze ukubulawa kabuhlungu.
Lawrence Bittaker kunye noRoy Norris: Iibhokisi zokubulala iiBhokisi
Iphrofayili ye-Serial Rapist noMbulali uCesar Barone
UWesley Shermantine noLoren Herzog
Iprofayili yeSier killer Ted Bundy
Iphrofayili yoMbulali Oyingqungquthela uRichard Angelo
Iphrofayili yoMbulali womhlaba uRichard Cottingham
Indlela yokulungisa i-Error Connection Error
Xa iHajj okanye i-pilgrimage ukuya eMakkah ngo-2015 nini?
I-Yuchanyan kunye ne-Xianrendong Caves - I-Pottery enkulu kunazo zonke kwihlabathi
I-Rove Beetles, Family Staphylinidae
Izicubu ze-epithelial: Imisebenzi kunye neeNtlu zeeSeli
Indlela Yokuphucula Ukufunda Kwakho Ukukhawuleza
Ubunqunu ngo-1960s Sitcoms
Indlela yokubopha i-Double Fluke (Soft Jerkbait) Rig
Intandokazi yeFiction About Architecture
3 Ukuzonwabisa Iimvumi zezingane
Ukudibanisa kwe 'Ver'
Ukuguqulwa kweMerika: uMninimandla Jikelele u-Anthony Wayne